Xadhiga lagu boodboodo siliggu wuu ka dhuuban yahay, gacantuna waa ka gaaban tahay, markaa xadhiggu si degdeg ah ayuu u beddelmi doonaa, sidaas awgeed waa xadhig xirfad leh, laakiin ma aha mid waara oo fudud in la jebiyo, markaa waxaad iibsan kartaa dhowr kale markiiba.Ku habboon dadka si xirfad leh u jimicsada.
Maxaad u doorataa xadhig ka boodda?
Aynu is barbar dhigno dhawr xadhkaha boodboodka ah ee suuqa ka jira.
1. Xarig boodbood oo caag ah
Xadhkaha caagga ah waa mid raqiis ah dhammaan xadhkaha boodboodka, sidoo kale waa xoogaa xoog badan, ma fududa in la xidho, waana kharash, laakiin miisaanku aad ayuu u fudud yahay, kaliya ku habboon kuwa bilowga ah.
2. Cudbi xadhig ka booda
Xadhiga suufka lagu boodboodo waa mid adag oo dhexdhexaad ah.Haddii aad si lama filaan ah ugu dhufato, waxba kuma yeeli doonto, laakiin inta badan way ka gaabinaysaa inaad kor u kacdo waxayna ku habboon tahay kuwa bilowga ah.Dadka da'da ah ayaa sidoo kale dooran kara.
3. Bamboo xadhig ka booda
Bamboo xadhkaha boodboodka ayaa inta badan leh gacan-dheer, kaas oo ku habboon xadhkaha boodboodka ee quruxda badan, xargahana lama wada xidhi doono.Xadhigu waxa ay leeyihiin miisaan gaar ah oo waa kuwo raagaya.Waxay ku habboon yihiin dadka intooda badan.
4. Silig bir ah oo ka boodaya xadhig
5. Nayloon xadhig laga boodo
Xadhig ka boodi naylon ah waa mid xoogan oo fudud, laakiin ma fududa in la qabsado dareenka gacanta marka la ruxayo.Way ku habboon tahay isticmaalka hal qof, kuma habboona in dad badan ay ka boodaan xadhigga weyn.
6. Xadhig caag ah
Xadhiga rabadhka ahi aad buu u xoog badan yahay oo ma xidhmo, laakiin inta badan wuu ka cuslaaday, dadka caadiga ahna way ku adag tahay inay ka ruqaansadaan, wayna fududahay inay is tuso.Ilaa xirfadaha boodadu ay ka fiican yihiin mooyaane, ha dooran xadhigan boodada.
Sida cad, xadhigga ka boodada siligga ayaa aad waxtar u leh dhisayaasha jirka
Hadda aan aragno siliga Bangyi oo ka boodaya xadhig:
Hore: 7 * 7 1 * 19 PVC / PU dahaarka leh ee birta xadhig ka boodaya xadhig 3mm 4mm
Xiga: 6*7+ FC Hot-Dip Xarig bir ah oo galvanized xarig ah 1.5-12 mm
7 * 7 3mm PVC xadhig bir ah oo dahaarka leh
Silig-ka-boodka ee Shiinaha Birta
Xadhig ka boodaya silig bir ah
xadhig ka booda iibso, xadhig xirfad leh, xakamee xadhig boodi, xadhig booda caqli, xadhig boodboodka, xadhig la'aan xad-dhaaf ah,